Disable Autorun USB Devices — MYSTERY ZILLION
Disable Autorun USB Devices
USB Device တွေကို Autorun မတက်အောင် လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ USB Devices တွေထဲက ပါလာတဲ့ Virus တွေက အတော့်ကို ဒုက္ခ ပေးတာပါပဲ။ သူတို့ကို Autorun မတက်အောင် လုပ်ထားနိုင်ရင် Delete လုပ်ပြီး ဖျက်နိုင်ပြီပေါ့။
Start -> Run -> "regedit" ဆိုပြီး registry ထဲ၀င်လိုက်ပါ။
ဒီ Directory အတိုင်းသွားပါ။
MountPoint2 ကို right click ထောက်လိုက်ပြီး Permission ကိုသွားပါ။
Permission for MountPoint2 ဆိုတဲ့ Dialog Box လေးကျလာပါ့မယ်။
Advanced ဆိုတဲ့ Tab ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။
"Inherit from parent the permission entires that apply to child objects. Include these with entires explicitly difened here" ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို uncheck ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Remove -> Ok
ဒါပါပဲ။ နောက်ဆို ကွန်ပျူတာထဲကို ဘယ် removable ထိုးထိုး virus ပါပါ။ effect မဖြစ်တော့ပါဘူး။ သူတို့ထဲ၀င်ပြီး delete လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ယခုလို သိခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
နောက်ထပ် နည်းလမ်းလေရှိရင် မျှေ၀ပါအုံး၊ စောင့်မျှော်နေပါတယ်..
XP , Vista နှစ်ခုစလုံး အဆင်ပြေနိုင်ရင် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်..
နဂိုအတိုင်း ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ "inherit From Parent The Permission Entires That Apply To Child Objects. Include These With Entires Explicitly Difened Here" ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို အမှန်ခြစ်လေး ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့။ :67:
ဟုတ်ပါ့ ကိုရဲမာန်ရေ။ ကျွန်တော်တော်တော်ပိန်းတာပဲနော် :d ။